गणेशमानका पालामा कांग्रेस बनेका बालकृष्ण एमाले प्रवेश, भन्छन–‘एमालेको राष्ट्रियताले तान्यो’ - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
गणेशमानका पालामा कांग्रेस बनेका बालकृष्ण एमाले प्रवेश, भन्छन–‘एमालेको राष्ट्रियताले तान्यो’
नेपाली कांग्रेसमा लामो समय काम गरेका र विभिन्न पदको जिम्मेवारी सम्हालेका बालकृष्ण महर्जन एमाले प्रवेश गरेपछि काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर–८ का कांग्रेसमा खैला बैला मच्चिएको छ।। लामो समयदेखि नवीन्द्रराज जोशीले एकछत्र शासन गर्दै आएको क्षेत्र नम्बर–८ मा अहिले आम कार्यकर्ता जोशीसँग रुष्ट बन्दै एमाले प्रवेश गर्न थालेपछि कांग्रेसमा खैलाबैला भएको हो । काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर नं –२४ का इकाई उप–सभापति समेत रहेका महर्जनसहित कांग्रेसका दर्जनौँ कार्यकर्ता एमाले प्रवेश गरेपछि त्यस क्षेत्रमा एमालेको जित सुनिश्चित बन्दै गएको दावी गरेको छ । एमाले प्रवेश गरेका महर्जनले कांग्रेसभित्र गुटको पहाड रहेको भन्दै राष्ट्रियताको पहरेदार एमाले भएकाले एमालेमै प्रवेश गरेको बताएका छन् । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले टिका लगाएर एमाले प्रवेश गराएपछि महर्जनले कांग्रेसका सयौँ क्रियाशील कार्यकर्ताले एमाले प्रवेश गर्ने बताए । महर्जनसँग गरेको संक्षिप्त कुराकानीः
कांग्रेससँग तपाईँको मोह भङ्ग किन भयो ?
म सानो छँदा मलाई साहना प्रधानले भूमिगत हुँदा नै ट्युसन पठाउनु भएको थियो । तर, पछि म गणेशमान सिंहको प्रेरणाले नेपाली कांग्रेस बने । मैले निकै लामो समय नेपाली कांग्रेसमा बसेर काम गरेँ । तर, त्यो पार्टीमा कुनै पनि इमान्दार कार्यकर्ताको मूल्याङ्कन भएको मैले पाइँन् । मेरो मात्र होइन नेपाली कांग्रेसका धेरै कार्यकर्ताको गुनासो मेरो जस्तै छ । म अहिले पनि १३–१४ वटा संघ–संस्थामा आवद्ध छु ।
भनेपछि पार्टीले मूल्याङ्कन नगरेकै कारण तपाईँले नेपाली कांग्रेस परित्याग गर्नुभयो होइन त ?
कुनै पनि पार्टीमा काम गरेपछि त्यसको नेतृत्वले मूल्याङकन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो नेपाली कांग्रेसमा छैन । यो निर्वाचनमा मात्र होइन । केही महिना अघि सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनकै सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने पनि त्यस्तै देखियो । आफ्ना मन परेका व्यक्तिलाई कोठामा राखेर छलफल गर्ने, पार्टी र संगठनमा छलफल नगर्ने, जिम्मेवारी पनि आफ्ना र नजिककालाई मात्र दिने संस्कार हावी भएपछि मैले कांग्रेसमा बसिरहनुको औचित्य नठानेर परित्याग गरेको हो । म गणेशमानको विचारबाट प्रभावित भएर कांग्रेस भएको हुँ । तर, अहिले कांग्रेसमा गणेशमानको विचार शून्य भएको छ । वीपीलाई सबैले विर्सिएका छन् । म कांग्रेसमा आवद्ध भएको २५ वर्ष भन्दा बढी भएको छ । म व्यापारी पनि हुँ । म कांग्रेसको काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर–२४ इकाई उप–सभापति भएर ६–सात वर्ष काम गरे । तर, मेरो मूल्याङ्कन भएन ।
एमालेमा चाहिँ के कारणले प्रभावित हुनुभयो ?
म सामाजिक कार्यकर्ता पनि हुँ । मलाई अहिले देश बचाउने राष्ट्रियताका पक्षमा कम गर्ने पार्टी चाहिएको छ । एमाले राष्ट्रवादी पार्टी हो । एमालेले लिएका राष्ट्रवादी अडानले मलाई प्रभावित पारेको छ । देश चलाउन सक्ने क्षमता भएको पार्टी पनि एमाले नै हो भनेर मैले यो पार्टी रोजेको हुँ । कुनै समयमा कांग्रेसले पनि बहुमत ल्याएको थियो तर देश विकासका लागि कुनै पनि काम गर्न सकेन । कांग्रेसले पाँच वर्षसम्म सरकार चलाएको पनि मलाई थाहा छैन । वाम गठबन्धन जोश, जागरका साथ नयाँ ढंगले आएको छ । म त्यही भएर एमाले प्रवेश गरेको हुँ । मलाई आशा छ । काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर–८ मा देश बनाउन सक्ने, प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्ने क्षमता भएका नेता छन् । उहाँहरुलाई विजयी बनाएर पठाउनु हामी सबैको दायित्व हो । यो क्षेत्रका कांग्रेसका धेरै क्रियाशील सदस्यले पनि वाम गठबन्धनलाई भोट हाल्ने निश्चित छ । म देश बनाउने पार्टी एमाले नै हो भनेर प्रभावित भएँ ।
यस पार्टीमा आएर के योगदान गर्छु जस्तो लाग्छ ?
काम गर्नका लागि कुनै पद नै चाहिदैँन । तल्लो तहमै भएपनि पार्टीभित्र रहेर योगदान गर्न सक्छु । काम गर्दैै जादाँ नेकपा एमालेले मूल्यांकन गर्छ भन्नेमा म ढुक्क छु । नेपाली कांग्रेसमा रहदाँ मैले नातावाद, कृपावाद हाबी भएको पाएँ । कांग्रेसमा गुटबन्दी मौलाएको देखेँ । त्यसैले मैले एमाले रोजेको हो ।